Tsy mpisotro dite amina lavanila daholo ny Malagasy – i am a malagasy in genève
27 janvier 2008 30 octobre 2008
Tsy mpisotro dite amina lavanila daholo ny Malagasy
Ny Fiangonana Protestanta any Onex miravaka hoan’ny « Hetsika hoan’i Madagasikara », Genève
Isan’ireo mpahazo vaovao mikasika izay hetsika momba an’i Madagasikara aty Soisa aho, ary matetika manatrika. Voalohany aloha dia tsikaritro fony aho tonga taty fa marobe ny vaovao mikasika an’i Madagasikara izay tsy fantatro. Izany hoe mba manitikitika ny eritreritro ny hahalala [curiosité]. Faharoan’izay raha sendra lohahevitra mba efa fantatro indray aho dia misy elanelany matetika amin’ny fomba fijerin’ny hafa. Ka dia mbola fianarana ho ahy koa izany.
Nanatrika ny fotoam-pivavahana protestanta vazaha izay nandraisan’ny antokom-pihira Malagasy Valihan’i Jehovah anjara tany Onex [Genève] aho androany Alahady 27 Janoary 2008. Io dia tafiditra tao anatin’ny Alahadin’ny Misiona izay ankalazain’ireo Fiangonana Protestanta miteny frantsay aty Soisa isan-taona.
Ary toy ny mahazatra dia fotoana azahoana tatitra mikasika ny an’i Madagasikara ireny fotoana ireny noho ireo tetikasa roa izay misahana ireo osa indrindra eo anivon’ny fiaraha-monina Malagasy dia ny zaza sy ny 4’mi [“fampianarana hoan’ny zaza rehetra” | “toby Fifampandrosoana ho fanohanana ireo 4’mi” fiaraha-miasa amin’ny Fiangonan’i Jesoa Kristy eto Madagasikara, na FJKM].
Nahafinaritra ny fotoana. Tanora Katekomena [mpianatra ho mpandray] avokoa no nandray fitenenana. Nameno ny fiangonana [sady nanarona ireo vazaha maro an’isa 😉 ] ny feon’ireo Malagasy vitsy an’isa [indrindra ny antokom-pihira 😀 ]. Rehefa hadiva hifarana ny fotoana, taorian’ny fisaorana mitafotafo hoan’ireo rehetra nanomana sy nandray anjara nahalavorary ny fotoana, dia nanasa ny mpiangona rehetra Ramatoa mpitandrina : “Aorian’ny fotoana dia asaina amim-panajana isika hizara dite amina lavanila, mba hiombonantsika amin-kafanana araka ny fanaon’ny Malagasy” marihina fa sady nanjavona be no -5° C ny mari-katsiaka taty androany.
Nony nandray fitenenana hamaly izany fisaorana izany ny solontenantsika Malagasy [antokom-pihira] dia hoy izy “Rehefa mihevitra ny mponina aty Soisa izahay avy any Madagasikara dia mino fa misesika sôkôla maraina, atoandro, hariva ianareo. Noho izany dia nitsiky anaty aho raha nilaza ny momba ny dite amina lavanila fisotron’ny Malagasy Ramatoa pastora teo satria na dia renivohitra eran-tanin’ny lavanila aza i Madagasikara, dia zavatra tsy fahita na fampiasan’ny sarambabem-bahoaka ny lavanila nohon’ny halafosan’ny vidiny …” 😀 vaky hehy ny iray fiangonana … moa izaho mahita hotaterina indray androany …
Posté dans fivavahana, Valihan’i JehovahTagué antokom-pihira, fiangonana, fivavahana, foto, genève, geneva, hira, jehovah, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, photo, photographie, photographies, photography, photos, valiha, valihan'i jehovahpar tomavana4 commentaires
4 réflexions sur “Tsy mpisotro dite amina lavanila daholo ny Malagasy”
Tsy mihinana chocolat daholo tokoa ny olona any soisy, za koa mahalala frantsay tsy tia fromazy ary tsy misotro dite misy vanila daholo ny malagasy. Misy ihany anefa ireo mpivarotra dite sasany manisy vanila ao anatin’ny siramamy (indraindray tantely koa, fa velona fotsiny le izy, iny le akisako amin’ny sotrokely) lol.
31 janvier 2008 à 15:39
> iny le akisako amin’ny sotrokely lol
Oadray sao dia izay tokony hotsakotsakoana indray no akisakisaka
Ireo lahatsary napetrakao mikasika ny nofin’ireo tanora any Madagasikara dia mampahatsiahy fa manankarena fahasamihafana tokoa isika Malagasy 😀 Mamerina ny fankasitrahana !
edsat dit :
5 février 2008 à 20:35
Na izaho aty an-dafin’ny riaka aza tsy misotro dite amin’ny lavanila isan’andro o! mahatsikaiky tokoa …
5 février 2008 à 22:01
Faly mandray anao etoana edsat 😀
Angamba samy efa niharan’izany “cliché” izany daholo isika. Ohatra hafa, rehefa nilaza aho fa tsy nahita izay Ranomasina talohan’ny faha-6 taonako dia gaga ry zareo hoe, f’angaha tsy nosy moa i Madagasikara e ? Eny hoy aho, nosy ngeza avo in-16 kokoa noho i Soisa 😉
← 08|02|21 – Miasy Raoloson | Zam Zam [Genève]
Ny mpitondra fiangonana sy ny fanaovana pôlitika →